» किशोर र लक्ष्मी को खुल्यो नयाँ रहस्य ! सृजना ले मुख खोलिन (हेर्नुहोस भिडियो) किशोर र लक्ष्मी को खुल्यो नयाँ रहस्य ! सृजना ले मुख खोलिन (हेर्नुहोस भिडियो) – हाम्रो खबर
किशोर र लक्ष्मी को खुल्यो नयाँ रहस्य ! सृजना ले मुख खोलिन (हेर्नुहोस भिडियो)
2021, May 5th, Wednesday
भिडियो तलको समाचरको अन्त्यमा छ । काठमाडौं । बलिउडकर्मी मात्र हैन यतिबेला कलिउडकर्मीहरु पनि त्यतिकै मा’त्रामा ट्रोलको शिकार बन्न थालेका छन् । अहिले दिनहु जसो ट्रोलको शि’कार बन्न थाले’कि छिन् गर्भवती नायिका प्रि’यंका कार्की । उनले सा’माजिक सञ्जालमा गरेका ग’र्भ’वती अ’वस्थाका फो’टोहरुलाई लिएर उनी ट्रो’ल बन्न थालेकि हुन् । उनले आ’युषमान सं’ग खि’चेको एउटा त’स्बिरमा हामी ग’र्भ’वती छौ लेखेकी थिईन् ।
यो पोष्ट’लाई लिएर छो’रा मान्छे पनि ग’र्भवती हुन्छ भनेर उनको केही हदसम्म ट्रोल बनाईयो ।त्य’सपछि पनि उनले आफ्नो पेट देखाएर खि’चिएका धेरै त’स्बिरहरु सा’र्वजनिक गर्न छोडेकी छैनन् । कहिले कु’कुर संग त कहिले आफ्नो नाईटोले जुस पिउँदै गरेको तस्बिर नै किन नहोस् । आइत’बारमात्रै उनले सामाजिक सञ्जा’लमा’र्फत सा’र्वजनिक गरे’को जु’स पिउँदै गरेको तस्बिर यतिबेला अत्या’धिक ट्रोल बनिरहेको छ ।
उनको पेटमा श्र’द्धा मा’स्केले ए’उटा शिशूको अनुहारको आकृति सिर्जना गरेकी छन्, जहाँ शि’शूले र आ’माले एक साथ जुस पिउँदै गरेको देखिन्छ । यद्यपी ट्रोलका बिषयमा उनले अर्कि गर्भवती नायिका ऋचा शर्मा सं’गको एक अ’न्र्तबार्तामा य’स्तो कुराले आफुलाई केही फरक न’पर्ने बता’एकि छिन् ।आफ्नो रियल लाईफमा आफ्नो खुशी सं’ग रमा’उन पा’उने सबैलाई अ’धिकार रहेको भन्दै ने’गेटिभ नजरले हेर्नेलाई आफ्नो भन्नु केही नरहेको टिप्पणी गरेकि छिन् ।